Onye na -eto eto Techpreneur Stanley Anigbogu na -akwado mmụta STEM na Naịjirịa
Ka ụwa na -aga n'ihu na -enwe ọganihu na teknụzụ, akụnụba na -apụta n'ezie achọghị ka ahapụ ha na ihe ọhụrụ a na -eto eto.
Mmụta bụ isi ihe n'ịkwado nkuzi a, agbanyeghị, ọ ga -abụrịrị ụdị ịkekọrịta ihe ọmụma ahaziri nke ga -ahụ na nkesa ya nha.
Ọbịbịa nke mmụta STEM egosila na ọ dị irè n'ime mgbanwe a dị mkpa na mba ndị na -emepe emepe na ndị na -emepe emepe.
N'oge na -adịbeghị anya, anyị na ya kparịtara ụka Stanley Anigbogu, Chief Executive Officer, ArtecHubs, onye na -akwado agụmakwụkwọ STEM iji kwadebe ndị na -eto eto site na afọ 6 ruo 18, nwere nkà na nzuzo, robotics, teknụzụ mpaghara na azụmaahịa.
“Anyị na - ekewapụta onye ọrịa dabere n’usoro ahụike sitere n’ Africa ”- Debo Odulana, onye guzobere Doctoora
Stanley bụ onye na -eto eto na -ahụ maka teknụzụ na Naịjirịa ugbu a n'afọ nke atọ ya na Ecole Nationale Des Sciences Appliquees, Morrocco, ebe ọ na -amụ Multimedia Development.
A ngwa ngwa ndabere
Stanley kọwara na mmụọ nsọ ya sitere n'ụdị fim (akụkọ ifo sayensị) ekpughere ya mgbe ọ na -etolite. Ihe nkiri dị ka ya si kwuo nyere ya ikike iche n'echiche na -abụghị ụwa gbara ya gburugburu.
“Amalitere m na wires, batrị mgbe m dị afọ ise, kemgbe ahụ, m na -eme nyocha, na -anwa imepụta ihe nke m, na -edozi nsogbu site na iji sayensị na teknụzụ. Enwere m mmasị na idozi nsogbu. “
Stanley malitere ọzụzụ STEM maka ndị na -eto eto na 2018 ọrụ ọ gara n'ihu ruo taa wee soro ndị otu NGO dị ka Atlas maka mmepe na Morocco, iji duzie ọzụzụ maka ụmụ akwụkwọ, n'ime ime obodo yana dị ka Stanley si kwuo, ọrụ ahụ emetụtala ụmụ akwụkwọ 5000.
ArtecHub lekwasịrị anya n'ịme ọzụzụ ụmụ akwụkwọ nọ n'ụlọ akwụkwọ n'efu na akwụ ụgwọ na ọnụ ala dị ọnụ ala
"Ya mere ebumnuche anyị na ilekwasị anya bụ iji ihe ụmụ akwụkwọ nwere ike ịhụ gburugburu ha dozie nsogbu, na -ebughachi ha na ha chọrọ otu nde dollar iji dozie nsogbu"
Ọrụ T n'efu
Project T n'efu bụ ọrụ ArtecHub mere n'otu oge n'oge ọrịa na-efe efe, n'agbanyeghị, Stanley kwuru na COVID-19 adịkwaghị ebe niile, yabụ na ụfọdụ ndị mmadụ enweghịzi mmasị inwe ụdị teknụzụ ahụ.
Stanley kọwara na T na -anọchite anya 'mmetụ', nke bụ ihe na -enye aka na -ehicha aka na -akpaghị aka nke na -ebunye sensọ ngagharị iji chụpụ ihe nhicha.
Sistemụ nchekwa etinyere n'ime na -egosi onye na -ejighị ihe nhicha aka, yabụ na ọ na -egbochi gị ịbanye ọ gwụla ma ị mere aka gị ọcha.
Mana n'oge ọrịa na -efe efe, ArtecHub rere nkeji iri abụọ na abụọ nke T Free gafee ndị NGO, ụlọ ọgwụ na ime obodo.
Ndị NGO dị ka Peace First na Embassy nke France na Morocco zụrụ n'ezie 15 n'ime nkeji iri abụọ na otu nke T n'efu nke ekesara ndị ime obodo chọrọ ngwaọrụ ahụ.
“Nke a bụ ihe anyị mere n'oge ọrịa na-efe efe, mgbe nke ahụ gasị, ọ bụ naanị ọrụ otu oge, mana na ọdịnihu anyị nwere olile anya imepụta ụdị teknụzụ a nke ga-aga n'ihu.
N'ọdịnihu, ị ga -enwe ọtụtụ nje ma ọ bụ ọrịa ndị ọzọ na -abịa, anyị ga -adịkwa njikere maka ụzọ ezi uche dị na ya iji dozie ha, agbanyeghị, isi Artech bub bụ iji dozie nsogbu dị n'aka site na iji sayensị na teknụzụ. ”
“Nke a bụ ihe mere ngwaahịa a ji bụrụ ihe ọhụrụ, na ọ naghị ekwe ka onye ọ bụla banye n'ime oghere ọ gwụla ma ị ga -eme aka gị ọcha. Nke ahụ nyekwara anyị ohere ịbụ ndị mbụ jiri ụdị nchekwa nchekwa dị 100%chepụta ụdị ihe nchacha aka nhicha aka dị otú a. ”
Ọrụ STEM nke Stanley maka ndị na-eto eto site na ArtecHub butere ya dị ka onye ikpeazụ na 2020 Falling Walls Foundation, Foundation nke German dị na Berlin.
Dabere na Stanley, mmemme ahụ kpughere ya na ndị kachasị n'ọhịa sayensị na teknụzụ. N'ime ngalaba o sonyere na ya, onye nwetara nrite Nobel na Physics pụtara.
Stanley sonyekwara ọzọ na mbipụta nke afọ a nke otu mmemme ahụ nke ahọpụtara ya ka ọ bụrụ onye mmeri na Breakthrough na ngalaba itinye aka na sayensị ka ọ nọchite anya Naịjirịa na Berlin.
Ọrụ Stanley na STEM ahụkwala ka ọ na -etinye Diana Awards, onyinye enyere ndị na -eto eto n'ofe ụwa, maka ncheta Princess Diana Wales.
Ihe nrite a bụ maka ndị isi na -eto eto na -eme ihe dị ịtụnanya iji gbanwee ma dozie nsogbu na obodo ha.
"A bụ m otu n'ime ndị Naịjirịa asatọ ga -enweta ihe nrite ahụ, n'ihi ihe niile anyị na -eme site na iji agụmakwụkwọ STEM iji kwalite nha anya nwoke na nwanyị na ngalaba STEM yana idozi nsogbu site na iji sayensị na teknụzụ mpaghara."
Stanley bụkwa onye mmeri nke SA ọhụrụ nzuko mpasa ụgbọ ala Facebook 2019 na Alinov International boot camp Morocco 2020 n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ.
“Yabụ na ndị a bụ ahụmịhe niile anyị na -enweta. Ọ na -enwetakwa ihe ngosi ụwa niile n'ihe sayensị na teknụzụ na -eme na mpụga Africa yana ihe ọ nwere ike ime n'ime Africa. ”
Ịjikọta ibu ọrụ abụọ
N'ịga akwụkwọ na ijikwa ọkwa ya dị ka onye isi oche nke Artechub, Stanley kwuru na mgbe ị nwere agụụ maka ihe ị na -eme, ọ gaghịzi na -enye gị nsogbu, n'ihi na agụụ gị na -akpali mkpa a chọrọ.
Dabere na Stanley, ọ na -ewe ụfọdụ ume na mbọ n'ịgbalị ịha nhatanha, ebe ị na -achụ nzere asambodo ya na nhazi maka ọmụmụ ihe ọzọ, ọ dịkwa mkpa ịrara oge nye ihe ị hụrụ n'anya na -eme.
“Anyị nwere awa 24, ọ dabere n'otú ịchọrọ iji ya. Maka m, enwere m ike ịkekọrịta oge m na -amụ ma nye na ihe m na -amụ kwekọrọ n'ihe m na -eme, ọ na -enyere m aka ito ụzọ abụọ.
Ma na njedebe nke ụbọchị, ọ na -ewe ọtụtụ ihe, mgbe ụfọdụ ana m enye onwe m ezumike. Ọzọkwa mgbe ị nwere otu, ị ga -enwe ike wepu ụfọdụ nrụgide n'akụkụ gị wee nwee ndị ga -arụrụ gị ọrụ ma kwụọ gị ụgwọ.
Yabụ na nke ahụ dị iche. Nke ahụ bụkwa ihe na -eme ka ọ dị mfe. Ma n'aka nke ọzọ, agaghị m agha ụgha. Ọ bụ n'ezie nrụgide. Mana maka agụụ, ọ na -eme ka ị na -agagharị ”
Teknụzụ ngwaike na ngwanrọ
Dịka ekwuru na mbụ, T free abụghị ihe kacha elekwasị anya ArtecHub na ibuga teknụzụ ngwaike ma ọ bụ iji ụdị teknụzụ ahụ dozie nsogbu, agbanyeghị, akụrụngwa akụrụngwa enwetụbeghị nnukwu uche na kọntinent Africa.
Obi abụọ adịghị ya na sistemụ ngwanrọ dị n'Africa edekọla ihe ịga nke ọma, ebe ọtụtụ ndị mbido Africa na -ewepụta ego na nnukwu ọnụọgụ.
Ajụjụ a ka dị ugbu a gịnị kpatara na anyị anaghị etinye ego na akụrụngwa n'ihi na, na njedebe nke ụbọchị, ngwanrọ ga -achọ akụrụngwa akụrụngwa ka ọ rụọ ọrụ.
"Echere m na nsogbu nke ndị na -emepụta ihe na -adịghị eji eme ihe bụ n'ihi nrụpụta ụlọ ọrụ yana ọnụọgụ ụlọ ọrụ dị na Africa na -arụ ọrụ na ngwaike dị ala ma e jiri ya tụnyere China, USA.
N'Afrịka, anyị etoliteghị na afọ ụlọ ọrụ ahụ ngwa ngwa dịka ha mere, yana n'ihi na ụwa na -aga ngwa ngwa n'ime afọ dijitalụ na n'ime afọ AI. Africa na -agbasi mbọ ike.
Ọ bụ ya mere ndị Afrịka ga -eji dabere na mpaghara ọdịda anyanwụ mgbe niile maka ihe ndị ahụ iji mee ngwanrọ ha.
Yabụ nke bụ eziokwu, echere m na anyị ga -ebido jiri nwayọ malite na obere ngwaọrụ, anyị nwere ike ịmalite site na ndị na -edozi isi, anyị nwere ike ịmalite na igwe ịsa ahụ. ”
Dị ka Stanley si kwuo, ArtechHub na-enyekwa ụmụ akwụkwọ nọ n'ime ime obodo akwụkwọ mpịakọta agụpụtara n'ime ka ọ bụrụ otu o si arụ ọrụ na ngwaike.
“Ọ na -esiri anyị ike n'ihi na ụfọdụ ihe eji arụ ọrụ, dị ka batrị, ka a ga -esi na China nye iwu. Mgbe ị na -ele ịtụ anya site na China na imepụta na Naịjirịa, ọnụ ahịa ya adịghị mma maka imepụta na Naịjirịa.
Yabụ na isi ihe bụ, ọ bụrụ na gọọmentị anyị na ndị isi anyị nwere ike itinyekwu ego na mpaghara ụlọ ọrụ mmepụta ihe, echere m na nke ahụ ga -enyere anyị aka nke ukwuu, ọ ga -eme ka ọrụ ahụ dị mfe.
Anyị nwere ike bido obere wee malite, wee malite ngwanrọ, a ga -emelite anyị mgbe niile na ngwanrọ, n'ihi na ndị Naịjirịa maara teknụzụ mgbe niile ma a bịa na dijitalụ ka bụ ezigbo acha anụnụ anụnụ, ekwere m na anyị anọworị na ọkwa zuru ụwa ọnụ mgbe ọ batara teknụzụ software ọbụlagodi n'Africa.
Anyị bụ ugbu a ahịa ngwanrọ na ụlọ ọrụ teknụzụ na Africa. Ya mere ekwere m na anyị nwere oghere ahụ. Werekwa malie azụ lelee ka anyị ga -esi mepụta ụlọ ọrụ wee chọọ ịga n'ihu na nke ahụ. ”